တစ်ခါတစ်လေ အိပ်မက်မှနိုးလာသည့်အခါ ကိုယ်မက်သောအိပ်မက်များကို သဘောကျပြီး ပြန်တွေးရင်း အတွေးနယ်ချဲ့ လို့ ပိုသတိရသွားမိတာ မျိုးလည်းရှိသည်။ စိတ်သွားတိုင်းသာ ကိုယ်ပါရာမည်ဆို ကျွန်မ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် အခုရှိနေသောနေရာမှာမရှိတော့ပဲ မြန်မာပြည်အနှံ့တွင်သာ လှည့်လည်ကျက်စားနေတော့မည်ထင်သည်။
အခုတလောမှာတော့ Facebook မှာ မြို့ကလေးကိုချစ်သူတွေ က တင်ထားကြသော ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အလွမ်းကပိုသည်း လာသည်။
ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်တိုင်း ငယ်စဉ်တောင်ကျေးက ကျွန်မ၏ ပုံရိပ်များကို ပြန်မြင်ယောင်လာသည်။
ကျွန်မအလွမ်းဆုံးက နွေရာသီကာလများပဲဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ တစ်နှစ်လုံး စာဖတ်၊စာကျက် စာမေးပွဲဖြေနှင့် ကျောင်းစာထဲမှာနစ်မြူပ်ထားရ သော ကျောင်းသားတိုင်း ပျော်ကြသည့် အချိန်မျိုးကိုး။ စာမေးပွဲဖြေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ဆုံးဘာသာဖြေပြီးသည့် အချိန်မှာလွယ်အိတ် ကိုပစ်ချပြီး စာအုပ်စင်တွေထားထားသည့် အိမ်အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းကာ မထတမ်း စာအုပ်တွေဖတ်သည့်အခါဖတ်မည်။ မောင်နှမသားချင်း မရှိသောကျွန်မ အတွက် စာအုပ်တွေသည် ငယ်စဉ်ဘ၀ကတည်းကရော၊ယခုအချိန်ထိပါ အလွန်ကောင်းသည့် အဖော်တွေဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က လာခေါ်လျှင်တော့ မြို့ပတ် စက်ဘီးစီးပြီး ခေါက်ဆွဲစားတာ၊ညဈေးတန်းမှာရောင်းတဲ့ တို့ ဟူးပျော့၊ ဟင်းပေါင်းစတာတွေကိုထိုင်စားရင်းပျော်မည်။အလွန်တရာရှေးဆန်သော အဘွားများက လမ်းထွက်တာကိုမကြိုက်ပေမယ့် နားလည်သိတတ်စွာ ကျွန်မကို အတိုင်းအတာဖြင့် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလေ့ရှိသော အမေ့ကျေးဇူးကလည်းကြီးလှပါသည်။ မဟုတ်ရင် ကျွန်မ၏ငယ်ဘ၀သည် အဲလောက်ပျော်စရာကောင်းနိုင်မည်မဟုတ်။
သေးငယ်ပြီး ခေတ်မှီလှသည်လို့ မဆိုနိုင်သည့်မြို့ကလေးမှာ အလည်သွားစရာ ရှော့ပင်းစင်တာမရှိ၊အအေးခန်းရုပ်ရှင်ရုံမရှိ၊ ခမ်းနားလှပတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမရှိ၊ခေတ်မှီကစားကွင်းမရှိ။ကလေးတွေပျော်ကြသည့် တိရစ္ဆာန်ရုံတွေ ဘာတွေလည်းမရှိပါ။ (အခုထိလည်းမရှိသေး။)
Entry filed under: စာတိုပေစ.
မြသန်းတင့် -ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၈)	သဲငွေသောင်
1. Jeff | June 8, 2010 at 3:45 pm
2. K | May 8, 2010 at 4:02 pm